Home Wararka Riyada Farmaajo ma rumooyi doontaa? Xoog shisheeya oo aan xeelad lahayn...
Riyada Farmaajo ma rumooyi doontaa? Xoog shisheeya oo aan xeelad lahayn malagu xukumi karaa dal iyo dad?
Waxaa maanta oo Arbaca ah lagu soo gabagabeeyay doorasho la filaayay natiijadeeda oo uu ku guuleystay musharaxii MW. Farmaajo Cabdicasiis Laftagareen. Doorashada oo dhowr jeer dib loo dhigay ayaa loo adeegsaday ciidamo Itoobiyaan ah oo la sheegay in aanay ka mid ah taliska AMISOM, balse ka amar qaata Safaaradda Itoobiya ay ku leedahay Muqdisho.
Haddaba, sida uu dhowr jeer ku celceliyay MW. Farmaajo kaddib markii ay wakiilo ka tirsan beesha caalamka ay ka codsadeen in uu dib u dhigo doorashada si xal loogu helo xiisada siyaasadeed, balse Farmaajo aya u sheegay wakiilada beesha caalamka in la siiyo ilaa 19 bisha Desember inta ay ka dhacayso doorashada, taasoo uu ku macneeyay in ay arki doonan doorasho ku dhacdo si nabad ah.
Waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo daadiyay magaalada Baydhabo ciidamo Itoobiyaan ah kuwaaso gebi ahaanba la wareegay amniga magaalada isla markaana xayiray dhaqdhaqaaqa shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan Villa Somalia.
Waxaa si bareer ah loo handaday musharaxiin iyo siyaasiyiin badan waxaana si toos ah ula hadlaayay saraakiil Itoobiyaan ah oo u sheegay in ay qaataan go’aanka uu ku jiro maslaxadooda gaarka isla markaana ka tanaasulayaan musharaxnimada, walow ay kulligood ka diideen haddana waxaa si taa la mid ah lagu sameeyay handadaad xildhibaanada qaar, inta kalana loo qeybiyay lacag $20 kun oo doollar ah. Xildhibaanada aya loo sheegay in haddii ay codkooda la aadaan meel kale ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo sida uu MOL u sheegay mid ka mid xildhibaanada oo diiday in aan magaciisa xusno.
Si kastaba ha ahaatee MW. Farmaajo maxaa u xigi doona doorashada maanta dhacday? Waxaanan shaki ku jirin in siyaasiyiin iyo xildhibaano ka mid ah kuwa federaalka ah ay la kulmi doonaan culeys ay saarto dowladda federaalka ah, waxaana maalmaha soo socda dhici doona in la weeraro siyaasiyiinta mucaaradka ah, gaar ahaan kuwa leh xisbiyada siyaasadeed iyo xildhibaanada hormuudka ka ah mooshinka lagu soo eedeeyay MW. Farmaajo.
Falkan aya waxaa uu keeni doona laba mid.
1. In uu dhaco dagaal u dhexeeya siyaasiyiinta iyo dowladda, kaasoo sababi doona in ay shacabka toos u soo galaan dagaalka halkaana ay ka bilaabato shaqaaqo iyo dagaal aan la xakameyn karin.
2. In gebi ahaanba MW. Farmaajo uu kala diro Baarlabaanka halkaana uu isku dayo in uu si xoog ah ku haysto xukunka isagoo kaashanaya awood shisheeya, taasoo dalka uu dib ugu laaban doono sanadkii 2006 markii uu AUN Madaxweynihii hore Cabdulaahi Yusuf ay Muqdisho keeneen ciidankii Itoobiya, balse markii danbe ay kala kulmeen iska caabin shacab ilaa isaga baxeen Soomaaliya.
Previous articleItoobiya oo heshiiska uga baxday Farmaajo iyo qunsul cusub oo Hargeeysa loosoo magacaabay
Next articleKheeyre oo xariga ka jaray Xarunta (Otto Otto)
Dowlada Turkey oo tijaabisay Gantaalka S400
Maxkamad ku taala Puntland oo maanta qaadaysa dacwad ay gudbiyeen xildhibaano